Mr.huolang ayaa laga furay Karachi Pakistan
Markay ahayd Maarso 13, 2020, "Mr.huolang" wuxuu ka furmay Karachi Pakistan, wuxuu aasaasay kalsooni sumcad suuqa, wuxuu xoojiyay buundada aaminaad ee lala leeyahay shuraakada. Dukaanka Karachi fqranchisee — Waqar Khan, waa iibiyaha Bandhigga 25 -aad ee Yiwu. Intii lagu guda jiray Bandhiggii Yiwu, wuxuu dareemay in alaabtu ay ahaayeen kuwo habboon ...
Dugsiga ganacsiga Mr. huolang ayaa la furay!
Bishii Maarj 6, 2019, waxaa si rasmi ah loo aasaasay iskuul ganacsi oo huolang ah, tani waa guul muhiim u ah taariikhda horumarka shirkadda, taas oo macnaheedu yahay Mr. Xafladda daahfurka baska ...
Guddoomiyaha Zhou Jianqiao wuxuu ku guuleystay Boao "Abaalmarinta Halyeeyga Ganacsiga"
Shirweynaha Iskaashiga Ganacsiga ee Zhongsheng 2019 (Boao) ayaa si weyn looga furay May 16 -keedii Madasha Boao ee Hotel Asia. Zhou Jianqiao, oo ah guddoomiyaha Yiwu Mr.huolang Trading Co., Ltd., ayaa lagu sharfay in la casuumo oo uu ku guuleystay “Abaalmarinta Halyeeyga Ganacsiga.” Shir -madaxeedkaan wuxuu ururinayaa taxane taxane ah ...
Hoggaamiyeyaasha Kooxda Yiwu Mall Group waxay booqdaan shirkadda Mr.huolang
Bishii Abriil 19th, Zhao Wenge, maareeyaha guud ee Yiwu Mall Group, Zheng Xiangjun, maareeyaha guud ee Yiwu International Expo Center, iyo Liu Zhenting, maareeyaha guud ee laanta shanaad ee Yiwu International Trade City, ayaa booqday Yiwu Mr.huolang Trading Co., Ltd. Zhou Jianqiao, guddoomiyaha Yiw ...
Laanta Gobolka Sabah ee Rugta Malaysiya ayaa booqata Mr.huolang
May 23, 2019, Xoghayaha Guud Chen Weiyu ayaa hoggaaminayay kooxda, iyo Mr. Liu Shuntai, Madaxweyne ku-xigeenka Su Xiaofeng, Madaxweyne ku-xigeenka Liu Shoujian, iyo Ku-xigeenka Xoghayaha Guud Chen Qiulin iyo wefdiga 22 xubnood oo ka tirsan Rugta Shiinaha ee Malaysia of Commerce booqasho iyo kormeer Mr.huolang. Mudane Z ...
Mudane huolang shirkii sanadlaha ahaa ee 2018 wuxuu ku dhamaaday si guul ah
Markii jadwalka taariikhda loo rogay bog, saacaddii hore waxay hore u tilmaamtay Febraayo 2018. Habeenkii Bandhigga Guga, Maamulaha guud manager maareeyaha guud manager maareeyaha iibka iyo maareeyaha wax iibsiga ee Mr. huolang, hoggaamiyeyaasha waaxyaha kala duwan, dhammaan shaqaalihii ayaa isugu yimid ...
Kulanka 5 -aad ee isboortiga Mr. huolang Trading Co., Ltd.
Cirku waa cad yahay, qorraxduna way dhalaalaysay. Mudane huolang kulankiisii ​​5aad ee isboortiga ayaa la qabtay 6dii Juun. Waaxda Guryaha Waaxda Suuqgeynta Waaxda Suuqgeynta & Waaxda Shaqaalaha Waaxda Badeecadda Waaxda Macluumaadka Waaxda Macluumaadka Fina ...
Shirkii 37aad ee Barashada Badeecadaha oo uu qabtay Mr.huolang
Laga soo bilaabo 9 -kii Luuliyo ilaa 10 -keedii, 2019, koorsadii 37 -aad ee Shirka Barashada Badeecadda oo uu qabtay Mr.huolang Business School, taas oo soo jiidatay maareeyayaal badan oo dukaan si ay uga qaybgalaan oo ay heleen jawaab xamaasad leh. Bilowgii koorsada, Mr. Zhou Jianqiao, guddoomiyaha Yiwu Mr.huola ...
Mr.huolang ayaa ku soo biiray Yiwu Fair isagoo wata sawirro dukaanka dibedda ah.
Laga bilaabo Oktoobar 21 -keedii ilaa Oktoobar 25 -keedii, Mr.huolang wuxuu ku soo biiray Yiwu Fair oo leh sawirro dukaanka dibedda ah. dadku waxay jecel yihiin Mr.huolang.
Mr.huolang dukaankii ugu horeeyay ee dibada ah ayaa laga furay Malaysia
Iyada oo in ka badan toban sano oo ballaarinta astaanta ah, dukaanka Mr. Huolang ayaa daboolay 26 gobol oo Shiinaha ah, wuxuuna furay in ka badan 700 oo dukaan. Mr. Huolang wuxuu si tartiib tartiib ah u sameeyay qaabeynta suuqa gudaha. Gelitaanka suuqyada dibadda waxay fursad cusub u noqon doontaa Mr. Huolang. Markay ahayd Maarso 1, 2020, ugxantii ugu horreysay ...